Efa fantatsika ny daty famoahana sy ny vidin'ny Doogee S98 vaovao | Vaovao Gadget
Ignatius Room | 18/03/2022 13:16 | Finday
Amin'ny 28 martsa, ny Doogee S98 dia hitifitra ny tsena, ny finday avo lenta vaovao avy amin'ny mpanamboatra Doogee, fantatra amin'ny telefaona finday, ary hanao izany amin'ny vidiny fampidirana manokana $239, vidiny fampidirana izay tsy ho hita raha tsy eo anelanelan'ny 28 martsa sy 1 aprily.
Ny vidiny mahazatra amin'ity fitaovana ity dia $ 339, noho izany ny tolotra fampidirana mamela antsika hamonjy 100 dolara. Ankoatra izany, afaka mandray anjara amin'ny fisarihana ny 4 Doogee S98 isika amin'ny alàlan'ny tranokalany. Manomboka ny 28 martsa ka hatramin'ny 1 aprily, afaka mividy ny Doogee S98 isika $ 239 en AliExpress y doogeemall.
1 Inona no atolotry ny Doogee S98 antsika
1.4 Batterie hatramin'ny 3 andro
2 Aiza no hividianana ny Doogee S98
Sehatra fitahirizana 256 GB USF 2.2 ary azo itarina miaraka amin'ny microSD
efijery 6.3 santimetatra - FullHD + fanapahan-kevitra - LCD
ny hafa NFC - Android 12 - fanavaozana 3 taona
Ny Doogee S98, dia tantanin'ny processeur Helio G96 avy amin'ny MediaTek. Miaraka amin'ny processeur, dia mahita 8 GB an'ny RAM sy 256 GB fitehirizana, fitahirizana izay azontsika ampitomboina amin'ny alàlan'ny karatra microSD.
Ny Doogee dia misy efijery 2. Ny voalohany sy ny lehibe dia manana haben'ny 6 santimetatra. Ny efijery faharoa, hitantsika ao amin'ny aoriana ary manana habe 1,1 santimetatra.
Amin'ny alalan'ity efijery aoriana ity dia afaka mahita ny fotoana isika, mitantana ny fandefasana mozika, valio ny antso, jereo ny haavon'ny bateria, jereo ny hafatra azonay…
Amin'ny maha fakan-tsary iray amin'ireo fizarana izay eritreretin'ny mpampiasa indrindra, dia nandinika manokana azy ireo ry zalahy ao amin'ny Doogee. Ao ambadiky ny fitaovana no ahitantsika 3 lesy:
64 MP sensor lehibe
8 MP malalaka zoro ary
20 MP sensor night vision novokarin'i Sony.
Ny fakan-tsary eo anoloana dia nataon'i Samsung ary manana a Fanapahan-kevitra 16 MP.
Batterie hatramin'ny 3 andro
Miaraka amin'ny Bateria 6.000 mAh, ny Doogee S98 dia manana fahaleovan-tena 2 hatramin'ny 3 andro miaraka amin'ny fampiasana antonony ny fitaovana.
Izy io dia mifanaraka amin'ny famandrihana haingana hatramin'ny 33W, miaraka amin'ny charger misy hery mitovy. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby.
Aiza no hividianana ny Doogee S98
Ny Doogee S98 vaovao dia ho hita ao amin'ny Aliexpress sy Doogeemall miaraka amin'ireo rohy ao amin'ny fampidirana lahatsoratra. Rehefa tapitra ny fampiroboroboana ny fandefasana dia $339 ny vidiny. Raha tsy mamela izany ny toe-karenanao dia azonao atao koa ny mahazo ny iray amin'ireo 4 Doogee S98 izay ataon'ny mpanamboatra amin'ny alàlan'ny tranokalany miaraka amin'ireo rohy voalaza etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Efa fantatsika ny daty fandefasana sy ny vidin'ny Doogee S98 vaovao